बाबा रामदेवको दाबी : गुर्जोको रस पिउँदा को#रोना संक्रमण ठीक हुन्छ ! - Aajako Nepali Khabar
बाबा रामदेवको दाबी : गुर्जोको रस पिउँदा को#रोना संक्रमण ठीक हुन्छ !
भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले को#रोना भा#इरस (को#भिड)सँग नडराउन आग्रह गर्दै गुर्जोको रस पिउँदा फाइदा हुने बताएका छन् । उनले झारखण्ड राज्यको एक कार्यक्रममा गुर्जोको रस पिउँदा को#रोना भाइ#रले संक्रमण नगर्ने बताएका हुन् । रामदेवले गुर्जोका साथै अन्य ४ घरेलु जडीबुटीको मिक्स रस पिउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने हुँदा को#रोना भा#इरसको संक्रमणबाट बच्ने सल्लाह दिएका हुन् ।
पूरै विश्व को#रोना भा#इरसको महामारी झेली रहेको बेला तर रामदेवले घरेलु उपचार पद्धतिले को#रोना भाइ#रसको संक्रमण नहुने दाबी गरेका छन् । उनले झारखण्ड पुगेर कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा भने ‘नियमित योग र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको माध्यमले हामी को#रोना भा#इरससँग लड्न सक्छौँ । योग र पाँच औषधियुक्त सामग्री प्रयोग गर्दा सधैँका लागि को#रोना भाग्छ ।’
रामदेवले भस्त्रीका, कपालभाती र अनुमोल विलोम, प्राणायम र हल्दी, मरिज, गुर्जो, अदुवा र तुलसीको रस बनाएर नियमित खाए को#रोना भा#इरसको संक्रमणले नछुने बताए । उनले यसलाई बिहान बेलुका खान पनि भनेका छन् । को#रोना लागेका मानिसले पनि यी औषधिको रस खाएमा आराम मिल्ने उनको दाबी छ ।
उनले कसैलाई पनि आतंकित नहुन सल्लाह दिएका छन् । साथै रामदेवले अन्य दुर्व्यसनबाट पनि मुक्त रहन सबैलाई आह्वान गरे । नेपालमा अहिले को#रानाका बिमारी देखिन थालेका छन् । यसबाट बच्न गुर्जोका प्रयोग गर्नुपर्ने बाबा रामदेवलगायतका व्यक्तिहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यो नेपाल लगायतका देशमा पाइने जडीबुटी हो । वनस्पतिविज्ञ तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले यसमा रोगसँग लड्न प्रतिरोध क्षमता बढाउन धेरै मद्दत गर्ने बताएका छन् । रोगसँग लड्न प्रतिरोध क्षमता बढाउने भएकाले गुर्जोको सेवन गर्ने सल्लाह आयुर्वेदिक चिकित्सक दिँदै आएका छन् ।
अहिले आयुर्वेदका चिकित्सक यसले प्रतिरोध क्षमता बढाउने बताइरहँदा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग पनि बढेको छ । यो लहरेदार पतझर विरुवा हो । यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ । यसका आँख्लाहरूबाट जरा निस्केका हुन्छन् । यसको बोक्रा कागज जस्तो पातलो हुन्छ ।
बोक्रामा सेता गन्थीका थोप्ला हुन्छन् । यसका फलहरू आँख्लाबाट लामो लहरेदार भागमा फल्दछन् । भाले भूलहरु झुप्पामा झुप्पा हुछन् । पोथी फुलहरु एक्ला एक्लै हुन्छन् । फलहरु गुदीदार हुन्छ । आकारमा अण्डाकार हुन्छ र केराउका दाना जत्रा हुन्छन् । फल पाकेपछि राता हुन्छन् ।
पुजा शर्माले मलाई बुवाको अभाव महशुष हुँदैन, अस्ती बुवाको फोन आएको थियो आवाज सुन्न मन नलागेर नबोली राखिदिए हेर्नुस् [ भिडियो सहित ])